Kulmiye ahaan markii aannu ku guulaysaney Hoggaaminta Qaranka wax badan oo wacan baanu qabanay, laakiin waxyaalo leexday oo aannu horseed ka nahay baa Jira W/Q Dacar jama.
Friday August 04, 2017 - 10:57:49 in Maqaallo by
Kow laba ayeynu ka bilaabaynaaye, markiiba Waxa meesha ka baxday isjeclaantii,wada jirkii iyo maankii wada socdey!
Waxa meesha iyana ka haadey xisbinimadii, oo waxa la xooray si ay u dhacdayba taageeroyaashii Xisbiga la Soo halgamey ee maalkoodii, maskaxdooxii iyo magacoodiiba u huray badidood!
Waxa markiiba loo yeedhay, oo xilalkii ugu cuslaa loo dhiibey, raggii iyo dumarkii ka Soo horjeedey siyaasadii Xisbiga Kulmiye Wakhtigii Aannu Mucaaradka Xoogan Ahayn, waxay taasi niyad jab wayn Ku noqotay raggii iyo dumarkii tirsiisinka ahaa, ee Kulmiye udub dhexaadka u ahaa.
Waxaanu la Soo baxnay wixii aannu ku dhaliilayney xisbigii talada markaa hayey ee Udub, weliba Waxa la odhankaraa baro ayaannu dhaafinay.
Waxaanu yeelanay kooxo badan iyo kala daadsanaan badan oo horseeday in la kala fadhiisto,oo hurimooyin is hor fadhiya la noqodo,taas oo Soo dedijisey in ay wiiqdo awooddii xisbinimada, dano gaar ahna la kala raacdo, oo la kala Aragti filiqsanaado.
Waxa halowday kalsoonidii Kulmiyiin badan, oo Kulmiyenimada u hanwaynaa, oo Ku uursamaa.
Axmed Siilaanyo alle ha dhawree, waagii uu Guddoomiyaha Kulmiye ahaa, ee aannu noqon Madaxwaynaha Somalilaan Waxa uu isku Hayey qamaamuurtii kala aragtida hoose ahayd,ee haddana hilinka wada raacaysey, hadda oo aynu joognana isaga iyo Guddoomiye Muuse midna Uma aanoobayo waxyaalaha aynu farta ku fiiqayno ee hayga degdegina.
Falaadh baan cirka u diray
Fool bay la maqantahay!
Waxaan u socdaa laba arrimood, oo is barkan.
1. In haddii aannu marka labaad guulaysano haddii alle Idmo, aanay naga weecan, wixii hadda naga weecday iyo
2. In laga degtoonaado waxyaalaha wax dhabqiya iyo siyaalaha ay nooga dhabqeen!